JUNE&MAY: #ငယ်စဉ်က ကလေးဘ၀ ကိုပြန်လိုချင်သလား?
Posted by JuneOne at 3:21 PM
sin dan lar January 17, 2009 at 5:15 PM
ငယ်ငယ်ကနေ ၁၀ တန်းအောင်ပြီး ကျောင်းဆက်တက်ဖို့စောင့်နေရတဲ့ အချိန်ထိတော့လိုချင်တုံးပဲ....မျောက်ရှုံးအောင် ဆော့ခွင့်ရခဲ့လို့....။
နယ်မှာဆိုတော့ ကျူရှင်ကလည်း အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ Phy:၊ Chem:
ပဲရှိတယ်....Wuthering Heights သင်ရတာကိုလည်း
စာသင်တယ်မထင်ပဲ ၀တ္ထုဘာသာပြန်ပြနေသလို အရမ်းပျော်တယ်..။
JuneOne January 17, 2009 at 5:53 PM
တို့၁၀တန်းရောက်တော့Wuthering Heights မဟုတ်တော့ဘူး။မြန်မာပုံပြင်တွေကို ဘာသာပြန်ထားတာ။
nu-san January 17, 2009 at 6:56 PM
အမလည်း ညက အဲဒီ ဆရာမ မစန္ဒာ စာအုပ်ဖတ်ရင်း စိုင်းထီးဆိုင် သီချင်းကို သတိရလို့ ဖွင့်မလို့ လိုက်ရှာလိုက်သေးတယ်..
နောက်ဆုံးအဖြေကိုတော့ သဘောကျမိတယ်.. ကိုယ်တွေးထားတာနဲ့ တူလို့.. “
မလိုချင်တော့ပါ စာတွေပြန်ကျက်ရမှာ မုန်းလှသည်။” :)
ဇနိ January 17, 2009 at 7:34 PM
အော် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အဲဒီ စာကို တနေ့ကပဲ ဖတ်လိုက်မိတာ...
စာကတော့ မလုပ်ချင်တော့ဘူး.. ဒီစာတွေပဲ ကြည့်ရတာ ပျင်းလာပြီ
JuneOne January 17, 2009 at 9:59 PM
စာမေးပွဲဖြေမယ့် ညရဲ့ pressure ကို မီးမီးကြောက်ကြောက်။
ကိုဇနိကို ဖတ်ပြီး ပြန်ရှင်းပြလို့ပြော။
Annpi January 18, 2009 at 9:55 AM
ဖတ်ထားပြီးသား စာတွေ တစ်ခုမှ မမေ့ပဲ ပြန်ငယ်ရမည် ဆိုလျှင်တော့ ပြန်ငယ်ချင်ပါသည်။ ဆော့ ချင်လို့... :D ငယ်ငယ်က ဆော့လွန်းလို့ လက်နှစ်ချောင်းလုံး ကျိုးဖူးပါသည် :P
JuneOne January 18, 2009 at 12:34 PM
You are naughty boy in childhood life.:-p